ILizwe Lesithembiso: Ukuthengisa okuNenzuzo kunye noZinzileyo kwi-ROI nje ngaphambili | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 20, 2015 NgoLwesihlanu, Oktobha 23, 2015 Katie Karr
Wamkelekile kwezobuchwepheshe bezentengiso obubizayo Ixesha lamava abaThengi.
Ngo-2016, iipesenti ezingama-89 zeenkampani zilindele ukukhuphisana ngokwamava abathengi, vs 36% kwiminyaka emine edlulileyo. Umthombo: Gartner
Njengoko isimilo sabathengi kunye neetekhnoloji ziqhubeka nokuvela, izicwangciso zokuthengisa umxholo wakho kufuneka zihambelane nohambo lwabathengi. Umxholo ophumeleleyo ngoku uqhutywa ngamava- nini, phi kwaye njani abathengi bafuna oko. Amava aqinisekileyo kuwo onke amajelo entengiso yeyona nto iphambili kule nguqulelo.
Ukwandisa kuhlolisise le nto kwi-infographic yabo yakutshanje, Ukuxhobisa ukuThengisa ngesiQulatho sakho seMfazwe eNtsha: Amava abaThengi. Yimbono ebanzi yendlela ukuthengisa umxholo wakho kuwachaphazela ngayo amava abathengi, ukubonelela ngeengcebiso malunga nokuba ungaluchaphazela njani uphawu lwakho.
Izinto ezinamava abathengi abaphumeleleyo zinokushwankathelwa zibe ziimvakalelo ezintathu:
Yazi umthengi -Yamkela umthengi, imbali yakhe, kunye nezinto ozikhethayo.
Thetha nomthengi - Cofa kwiimvakalelo, ubonise izinto abazikhathaleleyo, kwaye musa ukuchitha ixesha ngezinto abangazenziyo.
Musa ukushiya umthengi ejinga -Nika iimpendulo ezifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo, nangexesha kunye nalapho abathengi bafuna khona
Ukuthengisa okunenzuzo kunye nokuzinzileyo kuyafikeleleka. Landela la manyathelo kwaye ishishini lakho kungekudala liza kungena kwiLizwe Lesithembiso.
tags: ulawulo lokuqukethweUkuThengiswa kweMpahlaamava kumakhasimendeUlawulo lwee-asethi zedijithalikwi-infographicyandisa
Ndiyintatheli ephambili kwi-IUPUI egxile kubudlelwane boluntu kunye nomncinci kuLawulo loMsitho. Okwangoku ndifumana incasa yelizwe lentengiso njengomfundi osisigxina osafundayo DK New Media. Umfundi onekratshi, intombi, udade, umhlobo kunye nenja-mama.
Iindlela ezi-3 zokuphucula amava aVenkile kwiVenkile… kunye neRhafu